December 2019 - नवयुग
Dec292019 by nawayugaNo Comments
कसैका भनाइले तपाईको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यस्ता भनाइबारे हामी यहाँ उल्लेख गरिरहेका छौं । यसलाई मनन गर्नु भयो तपाइँको जीवनमा सफलता पाउन सकिन्छ । हामीले यहाँ यस्तै १० वटा कुराहरु राखेका छौं । १. मानिस जतिसुकै सुन्दर किन नहोस् तर कदर मानिसको गुण स्वभावको नै हुन्छ । २. दुख र पीडामा साथ दिने साथी प्राण भन्दा प्यारो हुन्छ, जुन बेला दुख परेको छ त्यो बेला साथ छोड्छ त्यो एक नम्बरको स्वार्थी हुन्छ । ३. आजभोलि मिठास खानासँग नडराउनुहोस्, तर मिठास बोलीसँग पक्का डराउनुहोस् किनकी त्यहाँ डरलाग्दो स्वार्थ लुकेको हुन्छ । ४. साथीको नाता त्यो होइन जुन दुनियाँलाई देखाइन्छ । साथीको नाता त्यो हो जुन, मनदेखि निभाइन्छ । ५. घमण्डले मानिसलाई केही समयसम्म त ठुलो बनाउँला तर महान भने कहिल्यै बनाउन सक्दैन । ६. दुनियाँमा कोही कसैको आफ्नो हुँदैन, मानिसहरु मलामी जान्छन् त केबल हाजिर जन
चितवन- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचनमा नेकपा बाहेक कसैले नजित्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले एक्लै दुई तिहाई भन्दा पनि बढी सिट जित्ने दाबी समेत गरे । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा आइतवार(आज) नेकपाले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनावमा नेकपाले एक्लैले दुई तिहाई भन्दा बढी सिट ल्याउने बताएका हुन् । निर्वाचन आउन तीन वर्ष बाँकि रहेको भन्दै प्रचण्डले पार्टी र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदा दुई तिहाइ सीट ल्याउन सकिने बताएका हुन् । प्रचण्डले भने,‘ अब ३ वर्ष पार्टीको काम र सरकारको कामले आउने निर्वाचनमा एक्लैले दुई तिहाइ बहुमतको सुनिश्चितता गर्नुछ । त्यो प्रतिवद्धता हामीले व्यक्त गरेका छौं ।’ पार्टी एकीकरण प्रकृयाले लामो समय लिँदा केही समस्या देखिएको भएपनि आगामी दिनमा
न पुर्खाले बनाए । नत नयाँ पुस्ताले नै । कैयौँ पुस्ता हुर्किए तर आकृति मेटिएका छैनन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, इटा, छड, सिमेन्ट, काठ .....केही जोड्नु परेको छैन् । आकृति बनाउनका लागि न कुनै लगानी गर्नु नै परेको छ । स्वतःस्र्फूत बने सारीमा शिव, गणेशका मुर्तिसहित थरीथरीका आकृति । प्रकृतिले निःशुल्क रुपमा अनुपम बरदान दियो स्वर्गद्धारी नगरपालिका वडा नम्वर पाँचलाइ । माटै माटाले भिन्नभिन्न आकृति पुस्तौदेखि बचेका छन् । मुसालधारे पानी जतिपटक परेपनि ती आकृति न भत्किए, नत मेटिए । अझै ढलेका छैनन् । चाम्रिएर बसेका छन् । समतल मैदान छ । माथीपट्टी हरियाली जंगल । नजिकै सल्लाघारी बन । अलिकती पर लागेपछि मिलेको सारी गाउँको घनाबस्ती । यही बस्तीकै एउटा कुनामा अलग प्रकृतिको ‘भू–बनोट’ छ । छ विघा सार्वजनिक जमिन क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त बनोटमा पछिल्लो समय दृश्वालोकन गर्न पुग्नेहरुको भिड लागिरहेको छ । सा
सरसफाइको नमुना गाउँ : सबै घरमा शुद्ध खानेपानी एक घर एक धारा अभियानले हरिचौरका ६ सय ९५ वटै घरमा पानीको सुविधा
(बागलुङ) — गलकोट नगरपालिका–५ की बेलकुमारी कालाको घरमा भाँडा सुकाउने चाँङ बनेको छ । यो चाँङमा सुकेपछि मात्र भाँडा घरभित्र लैजान्छिन् । आमा, छोरी र बुहारीको महिनावारी हुँदा र अरुबेला पनि फलामे तारमा कपडा सुकाउने चलन छाडिसकेका छन् । प्लास्टिकको डोरी टाँगेर कपडा सुकाउने गरेकी छिन् । सफा शौचालय र स्नान घर छ । साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था छ । गोठ र भकारो पनि सफाइ गरिएको छ । पानी सबैले उमालेरमात्र खान्छन् । घरभित्र पकाएको खाना छोपेर राख्न कालाले बालबालिकालाई पनि सिकाउने गर्छिन् । काँचो फलफूल खानेबेलामा पनि सफा पानीले मात्र धुने गर्छिन् । गाईभैसीलाई दिने खानेकुरा पनि सफा राख्ने गर्छिन् । भान्साकोठा सफा र धूवाँरहित छ । एक वर्षयता उनको घरमा २२ वटा सूचक फेरिएको स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेबिका डम्बरकुमारी कंडेलले बताइन् । ‘गाउँलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउने अभियान थालेपछि हरेक घरमा यस्तै
ध्वनिभन्दा २० गुणा छिटो उड्ने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र जडान गरेकाे रुसकाे दावी
२०७६ पुष १२ - अाणबिक रूपमा सम्पन्न मुलुकहरूले अाफ्नाे अाधुनिक तकनिकलाइ एडभान्स बनाउन दिनहु लागी परेका छन । जसमा काे अगाडी जाने भन्ने हाेडबाजी नै चलेकाे छ यसै क्रममा हाल रुसले ध्वनिकाे गति भन्दा २० गुणा तिब्र उड्न सक्ने हाइपरसोनिक अभानगार्ड क्षेप्यास्त्र जडान गरेको छ जनाएकाे छ । रूसका रक्षामन्त्री सेर्गेई सोइगुलले शुक्रबार राति १० बजे ती क्षेप्यास्त्र तैनाथ गरिएको बताएपनी जडान गरिएको स्थान बारे भने केही खुलाएका छैनन । तर त्यहाँका अधिकारीहरुले यसअघि नै त्याे क्षेप्यास्त्र पश्चिमी रुसको युराल पर्वत क्षेत्र वरपर राखिने संकेत दिएका थिए । ती क्षेप्यास्त्रमा ग्लाइड प्रणाली राखिएकोले प्रहार गर्न धेरै सहज बनाएको र त्यसलाई भेद गर्न असंभव हुने दाबी छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले परमाणु अस्त्र बोक्न सक्ने ती क्षेप्यास्त्रले रुसलाई अरु देशभन्दा अगाडि पुर्‍याएको दाबी गरेका छन । रुसको रक्षा मन्
लेबलबिनै बेचिन्छ खाद्यको चामल र सिमी
काठमाडौँ — संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले थापाथलीको खाद्यको गोदाममा लेबल बिनाकै सामाग्री बिक्री गर्दा पनि जरिवाना नगरी फर्केका छन् । खाद्यका पदधिकारीको लापरबाहीले ४८ हजार किलो बासमती चामल गोदाममै कुहिएको समाचार कान्तिपुरमा आएपछि उपसमितिका संयोजक नरबहादुर धामी सहितको टोली अनुगमन गर्न आइतबार मध्यान्ह आएका थिए। टोलीले कुहिएको गोदामको चामल र बिक्रिका लागि राखिएको सिमी र चामलको गोदाम पनि अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा प्याकिङ नगरेको समानमा लेबल नराखेको, ३० केजी भनेर प्रिन्ट गरिएर प्याक गरेको बोराको अक्षर मेटेर मार्करले २५ लेखिएको थियो। ‘यस्तो गल्ती हुँदा पनि संसदीय समिति सहितको टोलीले जरिवाना बिनै छाड्यो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मन्चका अध्यक्ष माधवप्रसाद तिमल्सिनाले भने, ‘अनुगमन त देखावटी मात्रै भयो।’ समितिले बजार अनुगमन गर्न नरबहाद
मर्न थाले राराका असला
मुगु — असला माछा धमाधम मर्न थालेपछि रारा ताल दुर्गन्धित भएको छ । हिउँ खोलामा हुने माछाको उक्त प्रजाति रारातालमा मरेको यो पहिलो घटना हो । माछा मरेर तालको किनारदेखि बीच भागमा उत्रिन थालेपछि जलेवा, हाँसका प्रजाति र कागलगायत चराले टिपेर खान थालेका छन् । विषादीका कारण माछा मरेको अनुमान छ । मरेका माछा खान रारा मध्यवर्ती बस्तीका बासिन्दा पनि डराएका छन् । मरेका माछाले गर्दा वरपरको वातावरण प्रदूषित भएको मुर्मा गाउँका बिर्खबहादुर रोकायाले बताए । ‘एक सातादेखि तालमा माछा मरेर तैरिन थालेका छन्,’ उनले भने । ताल वारिपारि गर्दा रबरका डुंगा वरिपरि मरेका माछा भेटिन्छन् । हिमपातले गर्दा वनजंगलको विषादियुक्त जडीबुटी बगेर तालमा आउँदा माछा मरेको हुन सक्ने रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज अधिकृत लालबहादुर भण्डारीले बताए । यसबारे अनुसन्धान भइरहेको निकुञ्जले जनाएको छ । करिब २९ सय २९ मिटर
Dec282019 by nawayugaNo Comments
काठमाण्डौ – सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । राज्य पुनर्संरचनापछि पहिलो पटक स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण हुन लागेको हो । विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर प्रशासनिक वर्गीकरणको प्रारम्भिक खाका समेत बनिसकेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय सुझाव समेत माग गरिसकेको छ । स्थानीय तहको राय सुझावलाई समेत समेटेर परिमार्जन सहित सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । वर्गीकरणका सूचक स्थानीय तहको यातायातको सुविधा, प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चारको सेवा, विद्युत सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय तहको स्तरलाई आधार मानेर विवरण तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्
तमु ल्होसारका अवसरमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा
कास्की, १२ पुस । गण्डकी प्रदेश सरकारले तमु ल्होसार पर्वका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको बैठकले गुरुङ समुदायले मनाउँदै आएको ल्होसार पर्वको अवसरमा यही पुस १५ गते मङ्गलवार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भैतिक पूर्वधार विकास मन्त्रि रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। तमु ल्होसारका अवसरमा गएको वर्ष पनि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको थियो।
काठमाडौँ, १२ पुस । पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गर्ने धेरैजसो विदेशीको शङ्कास्पद तथा आपराधिक गतिविधि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । पाँच महिना लामो पर्यटक भिसा लिएर आउने विदेशीहरूको अनलाइन ठगीदेखि बैङ्क तथा एटीएम ह्याकिङ, चोरी, मानव बेचविखन, यौन दुराचार, हत्या, अपहरण, लागूऔषध र दुर्लभ वन्यजन्तुको ओखटेपहार ओसारपसारमा संलग्नता बढ्दै गएको हो । नेपाल प्रहरीका अनुसार त्यस्ता अपराधमा भारत, चीन, बङ्गलादेश, बेलायत, अमेरिका, युरोप तथा अफ्रिका लगायत देशका नागरिकको संलग्नता बढी देखिएको छ । यो हप्ता शङ्कास्पद गतिविधि सञ्चालन गरेको अभियोगमा १२२ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेसँंगै विदेशीले नेपाललाई ‘ट्रान्जिट हब’का रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको थप तथ्य बाहिर आएको हो । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाक्षेत्री विदेशी नागरिकको क्रियाकलापमाथि निगरानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यो खबर आजको गोरखाप